Akụkọ - Igwe nkewa nke ikuku: A na-atụ anya ka ị nweta mmụba ego na-akpata na 2020 na 2026
"Nkwupụta ahụ ọgụgụ isi na-enye akụkọ kachasị ọhụrụ na nyocha na amụma nke ahịa akụrụngwa nke ikuku site na 2020 ruo 2026. Akụkọ ahụ na-enye nghọta dị mkpa ma na-enye ndị ahịa ohere ịsọ mpi site na akụkọ zuru ezu. Na mgbakwunye, akụkọ ahụ lekwasịrị anya na ndị isi egwuregwu na ụlọ ọrụ ikuku nkewa ikuku ịkọwapụta na nyochaa ogo ahịa, uru, ahịa ahịa, asọmpi asọmpi ahịa na mmepe ọhụụ.
Ahịa nkewa nke ikuku ga-eto site na XXX na 2019 ruo XXX na 2026, yana atụmatụ atụmatụ mmụba kwa afọ nke XX. Isi afọ a tụlere n'ọmụmụ ihe bụ 2019, a na-atụ anya nha ahịa ahụ site na 2020 ruo 2026.
Nke mbụ, akụkọ ahụ na-enye nkọwa bụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ, gụnyere nkọwa, nhazi, ngwa na usoro ọrụ mmepụta ihe. Air nkewa ngwá ụlọ ọrụ analysis na-nyere maka zuru ụwa ọnụ ahịa, gụnyere mmepe akụkọ ihe mere eme, nkewa analysis, isi mpaghara mmepe na mbara nwale nke ndị asọmpi.
Nke abuo, nyochaa atumatu atumatu uto na atumatu ya, tinyere usoro mmeputa ya na onodu ego. Nkwupụta ahụ na-ekwukwa banyere ntinye na data data, mbubata na mbupụ data, ụgwọ, ọnụahịa, ego, na oke oke n'akụkụ mpaghara (dịka United States, Europe, China, na Japan) na mpaghara ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, ikuku nkewapụ ikuku ga-egosipụta nyocha ahịa ahịa, ihe ndị na-anya ụgbọ ala na nsogbu ndị dabere na omume ndị ahịa na ọwa ahịa dị iche iche.
Coronavirus (COVID-19) na-agbasa n’ụwa niile, na-emetụta akụ na ụba na ahịa ụwa. Nkwupụta ahụ na-atụle ma na-akọwa mmetụta nke COVID-19 na ahịa nkewa nke ikuku na ngalaba ahịa niile, mpaghara, mba na ndị isi egwuregwu. North America na Europe bụ mba ndị coronavirus kachasị emetụta, ha bụkwa ndị isi na akụ na ụba ụwa. The akụkọ nyochara n'ụzọ zuru ezu na ahịa mmetụta na ikuku nkewa ngwá ahịa, ibu azum, ọkọnọ disruptions na China, na oriri nakawa etu esi.
Ndị nrụpụta kachasị elu na ahịa nkewa ikuku nke ụwa bụ: Linde JSC Cryogenic Metal Air Liquid Air Products Taiyo Nippon Sanso Praxair HNEC Hangyang Group Messer Sichuan nkewa nkewa AMCS Air Water Gas Engineering LLC
Site na nkwụsị nke uto akụ na ụba ụwa, ụlọ ọrụ nke ikuku ikuku na-ata ahụhụ ụfọdụ, mana ọ nọgidewo na-enwe nchekwube na afọ anọ gara aga. Ahịa akụrụngwa nke ikuku ikuku zuru ụwa ọnụ echekwala nkezi uto nke afọ ọ bụla nke XX.X%, site na XX USD na 2018 ruo XX USD na 2026. Ndị ọkachamara n'ọhịa anyị kwenyere na n'ime afọ ole na ole sochirinụ, ahịa nkewa nke ikuku ga-abawanye na 2026.
Nkwupụta ahụ bụ Intellect na-enye echiche doro anya banyere akụkụ dị iche iche, dịka nyocha nkewa, ndị na-enyocha mpaghara, pọtụfoliyo ngwaahịa, yana ozi zuru ezu banyere ndị isi ahịa ahịa na usoro M&A ha.
N'ikwu okwu banyere ala, akụkọ a na-amụ ndị na-emepụta ihe na ndị na-azụ ahịa, na-elekwasị anya na ikike ngwaahịa, mmepụta, uru, oriri, oke ahịa na ohere uto nke mpaghara ndị a, na-ekpuchi
Akuko ọgụgụ isi bụ ihe nkwụsị gị niile maka ihe niile metụtara nyocha ahịa na ọgụgụ isi ahịa. Anyị ghọtara mkpa ọgụgụ isi ahịa na mkpa ya dị n'ụwa taa nke asọmpi siri ike. Ndị otu ọrụ anyị ga - arụsi ọrụ ike iji nweta akụkọ nyocha kachasị dị mkpa, tinyere data impeccable, iji hụ na anyị ga - ewetara gị nsonaazụ ọma n'oge ọ bụla. Ya mere, ndị otu anyị ga-enwe obi ụtọ inye gị enyemaka kachasị mma, ma ọ bụ akụkọ kachasị ọhụrụ nke onye nyocha ma ọ bụ arịrịọ ahaziri iche.